အချစ်သီချင်းထက် ဘဝသီချင်းက ကျွန်တော့်အတွက် ပို အကြိုက်တွေ့စေပါတယ် - Kanbawza Tai News
Home အငျတာဗြူး အနုပညာ အချစ်သီချင်းထက် ဘဝသီချင်းက ကျွန်တော့်အတွက် ပို အကြိုက်တွေ့စေပါတယ်
အချစ်သီချင်းထက် ဘဝသီချင်းက ကျွန်တော့်အတွက် ပို အကြိုက်တွေ့စေပါတယ်
August 10, 2019 အငျတာဗြူး, အနုပညာ,
တေးသံရှင် ခွန်ငယ်လင်းနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရော့ခ်ဂီတ သမိုင်းတစ် လျှောက်တွင် နိုင်ငံကျော် တေးသံရှင် များစွာကို မွေးထုတ်ပေးခဲ့သလို လက်ရှိတွင်လည်း မျိုး ဆက်သစ် တေးသံရှင်များစွာ၊ ဂီတကိုရူးသွပ် မြတ်နိုးသူ လူငယ်များစွာကို မွေးထုတ်ပေးနိုင် သောမြို့ကို ပြပါဆိုလျှင် ရှမ်းပြည်နယ်၏မြို့ တော် တောင်ကြီးမြို့ကိုပင် ညွှန်းရမည် ဖြစ်ပါ သည်။
ယင်းကဲ့သို့ တောင်ကြီးမြို့မှ ထွက်ပေါ်လာ သည့် မျိုးဆက်သစ် တေးသံရှင်များ အနက် ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသား မျိုးဆက်သစ် တေးသံရှင် တစ်ဦးဖြစ်သော ခွန်ငယ်လင်းနှင့် ဆက်သွယ် မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။
Galaxy Star မပြိုင်ခင် Mingalar Mandalay Singing Contest သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲမှာ ဝင်ပြိုင်ခဲ့ ဖူးပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက Winner ဆု ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘောဇတိုင်း။ အစ်ကို့ရဲ့ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း နဲ့ မိသားစုအကြောင်း မိတ်ဆက်ပေးပါဦးဗျ။
ခွန်ငယ်လင်း။ ကျွန်တော့် နာမည်အရင်းက တော့ ခွန်ပြည့်ဖြိုးမောင် ဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာ နာမည်ကတော့ ခွန်ငယ်လင်းပါ။ ကျွန်တော့်မွေး ရပ်ကတော့ တောင်ကြီးမြို့ပါပဲ။ ပအိုဝ်းတိုင်း ရင်းသား တစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်တော့်မိသားစု အကြောင်း ပြောရရင် ကျွန်တော့်ကျေးဇူးရှင် မိဘ၂ ပါးနဲ့အတူ ညီအစ်ကိုမောင်နှမရင်းချာ အားလုံးပေါင်း ၁ဝ ယောက် ရှိပါတယ်။ ပညာ ရေးကတော့ B. Sc. (Maths)နဲ့ ကျောင်းပြီးထား ပါပြီ။
ကမ္ဘောဇတိုင်း။ ဂီတအနုပညာကို ဘယ်အ ချိန်ကတည်းက စပြီးတော့ ဝါသနာပါခဲ့တာပါ လဲ။ နောက်ပြီးတော့ ဂီတ အပြင် တခြားကော ဘာတွေ ဝါသနာပါသေးလဲ။
ခွန်ငယ်လင်း။ ဂီတအနုပညာကို ကလေး ဘဝ ကတည်းက သီချင်းတွေကို စပြီးခံစားနား ထောင်တတ်တဲ့ အချိန်မှာပဲ အရမ်းကို ရူးသွပ် ဝါသနာပါခဲ့တာပါ။ အဓိကကတော့ အဆိုသ မား တစ်ယောက်လို့ ခံယူထားတဲ့အတွက် အ ဆိုပညာကိုပဲ အဓိက ဝါသနာပါခဲ့ပါတယ်။ တ ခြားကတော့ ခရီးထွက်ပြီး ဆန်းသစ်တဲ့ သဘာ ဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို လိုက်ပြီး လေ့လာရတာ ဝါ သနာပါပါတယ်။
ကမ္ဘောဇတိုင်း။ ဂီတကို ဘယ်အချိန်က တည်းက စတင်ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်ခဲ့တာပါလဲ။ အခု လောလောလတ်လတ်မှာ ဂီတအပြင် တ ခြား ဘာအလုပ်တွေ လုပ်ပါသလဲ။
ခွန်ငယ်လင်း။ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်လောက်မှာ စပြီး လုပ်ကိုင်ဖြစ်သွားတာပါ။ အခု လောလော လတ်လတ်တော့ အနုပညာ ဂီတလုပ်ငန်း တစ် ခုပဲ လုပ်ကိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။
ကမ္ဘောဇတိုင်း။ အစ်ကို့ရဲ့ အချစ်ရေး အခြေ အနေကိုကော သိလို့ရမလား။
ခွန်ငယ်လင်း။ အချစ်ရေး အခြေအနေက တော့ အခုလောလောဆယ် ကျွန်တော့်ကို ကျွန် တော် အချစ်ဆုံးပါပဲ။ ကျွန်တော် လက်ခံတဲ့ ဘဝ အနေအထားတစ်ခုကို ရောက်လို့ ကျွန်တော့် စိတ်သဘောထားနဲ့ နားလည် လက်ခံပေးနိုင် မယ့် မိန်းကလေး ရှိလာခဲ့ရင်တော့ ကျွန်တော့် ဘဝ လက်တွဲဖော်အဖြစ် စိတ်တူကိုယ်တူနဲ့ လျှောက်လှမ်းသွားမှာပါ။
ကမ္ဘောဇတိုင်း။ Galaxy Star ပြိုင်ပွဲအပြင် တခြား ဘာပြိုင်ပွဲတွေ ဝင်ပြိုင်ဖူးသေးလဲ။ ဆုတွေကော ရရှိခဲ့တာ ရှိပါ သလား။
ခွန်ငယ်လင်း။ Galaxy Star မပြိုင်ခင် Mingalar Mandalay Singing Contest သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲမှာ ဝင်ပြိုင်ခဲ့ ဖူးပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက Winner ဆု ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘောဇတိုင်း။ အဲဒီလို ပြိုင်ပွဲတွေ ဝင်ပြိုင်တဲ့ အချိန်မှာ ဘယ်လို အခက်အခဲမျိုးတွေ ကြုံတွေ့ ခဲ့ရပါသလဲ။
ခွန်ငယ်လင်း။ တေးဆိုပြိုင်ပွဲ ဝင်ချိန်မှာအ တွေ့အကြုံကတော့ အများကြီး ရခဲ့ပါတယ်။ အဓိက အခက်အခဲကတော့ ကိုယ်ပိုင်အားနည်း ချက်နဲ့ အဖြေကို ရှာဖွေခွင့်ရတာရယ်၊ ဆန်း ကျယ်လှတဲ့ အနုပညာဂီတအလုပ်ကို ပိုပြီးလုပ် ဖို့အတွက် တစ်စိုက်မတ်မတ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို တွန်းအားပေးဖြစ်သွားတာက ကျွန်တော့်အတွက် အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ အခက်အခဲလို့ပဲ ခံယူပါတယ်။
ကမ္ဘောဇတိုင်း။ တေးဆိုအပြင် တေးရေးနဲ့ အတီးဘက်ကိုရော လုပ်ဖြစ်ပါသလား။ အခုလို အနုပညာလမ်းကြောင်းကို လျှောက်လှမ်းတဲ့အ ခါမှာ ကူညီပံ့ပိုးတဲ့သူတွေ ရှိခဲ့ပါသလား။
ခွန်ငယ်လင်း။ တေးဆိုအပြင် ကျွန်တော် သီချင်းတွေလည်း ရေးပါတယ်။ အတီးပိုင်းလည်း လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဂီတအနုပညာ ညီအစ်ကိုတွေ နဲ့ အပြန်အလှန် ဖေးမကူညီပံ့ပိုးရင်းနဲ့ပဲ စီးရီး တွေ လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘောဇတိုင်း။ သီချင်းဆိုတဲ့အခါ ပအိုဝ်းသီ ချင်းရော ဗမာသီချင်းရော ဆိုတာ တွေ့ရတယ်။ ဘယ်ဘာသာကို ပိုပြီး အားသန်ပါသလဲ။ ဘယ် လို ဂီတအမျိုးအစားကို ပိုအားသန်ပြီးတော့ ဆို ဖြစ်ပါသလဲ။
ခွန်ငယ်လင်း။ ကျွန်တော်က ပအိုဝ်းတိုင်း သား လူမျိုးဖြစ်တဲ့တွက် ပအိုဝ်းသီချင်းလည်း ဆိုပါတယ်။ အဆိုပိုင်းမှာ ဘယ်ဘာသာကို အား သန်တယ်လို့တော့ မရှိပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မွေးပြီး မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ယောက်အဖြစ် ခံယူထားတဲ့အတွက် မြန်မာသီချင်းတွေကို အ များကြီး ပိုပြီးလုပ်ဖြစ်သွားဖို့ များပါတယ်။ ဂီတ ကိုတော့ အမျိုးအစား အားလုံးကြိုက်တယ် လက်ခံတယ်။ ဒါပေမဲ့ Rock ဂီတကိုပဲ ပိုရူးသွပ်ပြီး ပိုလဲဆိုဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘောဇတိုင်း။ အခွေတွေ ထုတ်တဲ့ချိန်မှာ ဘယ်လို အခက်အခဲမျိုး ရင်ဆိုင်ခဲ့ရလဲ။ မှတ်မှတ် ရရ ဖြစ်ခဲ့ဖူးတာတွေကော ဘာတွေဖြစ်မလဲ။
ခွန်ငယ်လင်း။ Album ခွေထုတ်တဲ့ အချိန် အခက်ခဲတွေကတော့ အများကြီးပါ။ အဓိကတော့ ငွေကြေးအခက် ခဲပေါ့။ ပြီးတော့ ကိုယ့်စိတ်ကူးထားတဲ့အတိုင်း ဖန်တီးမယ့် သီချင်းကို အကောင်ထည်ဖော်နိုင်အောင် Band တွေနဲ့ အချိန်ယူ တိုင်ပင်ရတာပါပဲ။ မှတ်မှတ်ရရတော့ သီချင်းကောင်းကောင်းလေးဖန်တီးပြီး နားဆင်ခံစားနိုင်ဖို့က အချိန်အင်အား လူအင်အား ငွေအင်အား ပေါင်းစည်းမှု ပညာအင်အား အများကြီး လိုအပ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။
ကမ္ဘောဇတိုင်း။ အစ်ကိုဆိုတဲ့သီချင်း ဒါမှမ ဟုတ် ရေးတဲ့သီချင်းတွေထဲမှာ ဘယ်သီချင်းကို အကြိုက်ဆုံးလဲ။ အစ်ကိုရေးတဲ့ သီချင်းတွေ၊ ဆိုတဲ့သီချင်းတွေထဲမှာ အချစ်သီချင်းထက်ဘဝ သီချင်းတွေဆိုတာ ပိုတွေ့ရတယ်။ ဘာကြောင့် ပါလဲ။
ခွန်ငယ်လင်း။ လူ့ဘဝကကြိုး Album မှာ ခွန်နေမျိုးရေးပြီး ကျွန်တော်ဆိုထားတဲ့ ''မလွန် ဆန်နိုင်ဘူး'' တစ် ပုဒ်ရယ်၊ ခွန်ဆက်နဲ့ ဒေးဗစ် ခွန်နောင်ရေးတဲ့ ''ရှောင်ပုန်းရက်သူ'' သီချင်းတွေကို အကြိုက်ဆုံးပါပဲ။လူ့ဘဝဒဿန သီချင်းက ကျွန်တော့်အတွက် ပိုအကြိုက်တွေ့စေပြီး ပိုပြီးအဓိပ္ပါယ်ရှိလို့ပါ။ လူသားအားလုံးကို ချစ်တဲ့စိတ်လည်း ပါတာပေါ့။ အဲဒါကြောင့်လည်း ဘဝသီချင်းတွေကို ပိုဆိုဖြစ်သွားတာပါ။
ကမ္ဘောဇတိုင်း။ အစ်ကို့ အနေနဲ့ Album ဘယ်နှခွေ ထွက်ပြီးပြီလဲ။ ဘယ်နေရာတွေကို ဖြန့်ဖြစ်ပါသလဲ။ နောက်ထပ်ကော Album တွေ ထပ်ထုတ်ဖို့ ရှိပါသလား။ ရှေ့ဆက်ဂီတနဲ့ ပတ်သက်လို့ဘာတွေ ထပ်ပြီး လုပ်ဆောင်သွား ဖို့ ရှိပါသလဲ။
ခွန်ငယ်လင်း။ တစ်ကိုယ်တော် ဗူဘကာ အခွေကတော့ တစ်ခွေပဲ ထွက်ဖြစ်ပါသေးတယ်။ ကျန်တာ တစ်ပုဒ်စ နှစ်ပုဒ် Groups အခွေ တွေမှာတော့ ပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြန့်ချိတာက တော့တစ်နိုင်ငံလုံးပါပဲ။ ခွေပေါင်း ၃ဝဝဝ ထုတ် ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ထုတ်ဖို့ အများကြီး အစီစဉ်ရှိပါတယ်။ ရှေ့ဆက် ဂီတကိုတော့ အ ကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။ အားနည်း နေတဲ့ ဂီတပညာတွေကို လေ့လာဆည်းပူး ဖြည့် စွက်ရင်း နားဆင်ခံစားသူ ချစ်ပရိသတ်တွေကို လည်း ဆန်းသစ်တဲ့ ဖန်တီးမှုတွေနဲ့ အကောင်း ဆုံး ကြိုးစားပြီး အမြဲနားဆင်နိုင်အောင် လုပ် ဆောင် သွားမှာပါ။
ကမ္ဘောဇတိုင်း။ လူ့ဘဝကကြိုးဆိုတဲ့ သီချင်းကို ဘာကြောင့် Album Title ပေးဖြစ်တယ် ဆိုတာကိုလည်း ပြောပြပေးပါဦး။
ခွန်ငယ်လင်း။ ဒီ Album ထဲမှာ ကျွန်တော် အားအရဆုံး သီချင်းကတော့ လူ့ဘဝကကြိုးပါပဲ။ သီချင်းအားလုံးကို ခြုံကြည့်ပြီးတော့ လူ့ဘ ဝကကြိုး ဆိုပြီး ပေးဖြစ်သွားတာပါ။
ကမ္ဘောဇတိုင်း။ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသား တစ် ယောက်အနေနဲ့ ခုလို တေးရေး/တေးဆို လုပ် တဲ့ချိန်မှာ ဘယ်လို အခက်အခဲမျိုး ရှိခဲ့ပါသလဲ။
ခွန်ငယ်လင်း။ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသား တစ် ယောက်အနေနဲ့ တေးရေး/တေးဆိုမှာ ထွေထွေ ထူးထူး အခက်ခဲတော့ မရှိပါဘူး။ အဓိကတော့ သီချင်းဆိုတဲ့အချိန် စကားလုံး မပီသတာလေး တွေပေါ့။ အဲဒါလေးကိုတော့ သတိထားပြီး ပြင် ဆိုရပါတယ်။
ကမ္ဘောဇတိုင်း။ လက်ရှိ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အနုပညာ ဂီတအပေါ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားရ ကျေနပ်မှု ရှိပြီလား။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လိုအပ်မှု ရှိနေသေးတယ်လို့ ယူဆမိပါသလားဗျ။
ခွန်ငယ်လင်း။ လက်ရှိ အနုပညာဂီတနဲ့ ပတ်သက်လို့ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ နေရာမှာ ကိုယ့် ကိုယ်ကို သိပ်ပြီး အားရကျေနပ်မှု မရှိသေးပါ ဘူး။ ကိုယ်ဖန်တီးချင်တာတွေ အများကြီး အ ကောင်အထည် ဖော်ရဦးမှာပါ။ လိုအပ်ချက်တွေ ကတော့ ကိုယ်ထပ်ပြီး ဖန်တီးချင်တဲ့ ဂီတတွေမ ထွက်လာနိုင်သေးချိန်ပါပဲ။
ကမ္ဘောဇတိုင်း။ ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့ နိုင်ငံရေး အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်လို့ကော ဘယ်လိုများ မှတ်ချက်ပြု ပြောကြားလိုပါသလဲ။
ခွန်ငယ်လင်း။ နိုင်ငံရေး အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ ကျွန်တော် သိပ်မသိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ပြည်သူတွေအားလုံး အဆင်ပြေပြေနဲ့ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း နေစေချင်ပါတယ်။
တေးသံရှင် ခွန်ငယ်လင်းသည် လတ်တလောတွင် လူ့ဘဝကကြိုး အမည်ရ တစ်ကိုယ်တော် တေးအယ်လ်ဘမ် တစ်ချပ်ကို ထုတ်ဝေထားပြီး အခြားသော အုပ်စုအယ်လ်ဘမ်များတွင်လည်း တေးသီးချင်းများ တစ်ပုဒ်စ၊ နှစ်ပုဒ်စ သီဆိုထားပြီးကာ တေးသီချင်း များစွာကိုလည်း ထပ်မံဖန်တီးရန် ရှိနေသေးသည်ဟု သိရပါသည်။
အခဈြသီခငျြးထကျ ဘဝသီခငျြးက ကြှနျတေျာ့အတှကျ ပို အကွိုကျတှစေ့ပေါတယျ
တေးသံရှငျ ခှနျငယျလငျးနှငျ့ ဆကျသှယျမေးမွနျးခွငျး
မွနျမာနိုငျငံ၏ ရော့ချဂီတ သမိုငျးတဈ လြှောကျတှငျ နိုငျငံကြျော တေးသံရှငျ မြားစှာကို မှေးထုတျပေးခဲ့သလို လကျရှိတှငျလညျး မြိုး ဆကျသဈ တေးသံရှငျမြားစှာ၊ ဂီတကိုရူးသှပျ မွတျနိုးသူ လူငယျမြားစှာကို မှေးထုတျပေးနိုငျ သောမွို့ကို ပွပါဆိုလြှငျ ရှမျးပွညျနယျ၏မွို့ တျော တောငျကွီးမွို့ကိုပငျ ညှနျးရမညျ ဖွဈပါ သညျ။
ယငျးကဲ့သို့ တောငျကွီးမွို့မှ ထှကျပျေါလာ သညျ့ မြိုးဆကျသဈ တေးသံရှငျမြား အနကျ ပအိုဝျးတိုငျးရငျးသား မြိုးဆကျသဈ တေးသံရှငျ တဈဦးဖွဈသော ခှနျငယျလငျးနှငျ့ ဆကျသှယျ မေးမွနျးခဲ့ပါသညျ။
ကမ်ဘောဇတိုငျး။ အဈကို့ရဲ့ ကိုယျရေးအကဉျြး နဲ့ မိသားစုအကွောငျး မိတျဆကျပေးပါဦးဗြ။
ခှနျငယျလငျး။ ကြှနျတေျာ့ နာမညျအရငျးက တော့ ခှနျပွညျ့ဖွိုးမောငျ ဖွဈပါတယျ။ အနုပညာ နာမညျကတော့ ခှနျငယျလငျးပါ။ ကြှနျတေျာ့မှေး ရပျကတော့ တောငျကွီးမွို့ပါပဲ။ ပအိုဝျးတိုငျး ရငျးသား တဈယောကျပါ။ ကြှနျတေျာ့မိသားစု အကွောငျး ပွောရရငျ ကြှနျတေျာ့ကြေးဇူးရှငျ မိဘ၂ ပါးနဲ့အတူ ညီအဈကိုမောငျနှမရငျးခြာ အားလုံးပေါငျး ၁ဝ ယောကျ ရှိပါတယျ။ ပညာ ရေးကတော့ B. Sc. (Maths)နဲ့ ကြောငျးပွီးထား ပါပွီ။
ကမ်ဘောဇတိုငျး။ ဂီတအနုပညာကို ဘယျအ ခြိနျကတညျးက စပွီးတော့ ဝါသနာပါခဲ့တာပါ လဲ။ နောကျပွီးတော့ ဂီတ အပွငျ တခွားကော ဘာတှေ ဝါသနာပါသေးလဲ။
ခှနျငယျလငျး။ ဂီတအနုပညာကို ကလေး ဘဝ ကတညျးက သီခငျြးတှကေို စပွီးခံစားနား ထောငျတတျတဲ့ အခြိနျမှာပဲ အရမျးကို ရူးသှပျ ဝါသနာပါခဲ့တာပါ။ အဓိကကတော့ အဆိုသ မား တဈယောကျလို့ ခံယူထားတဲ့အတှကျ အ ဆိုပညာကိုပဲ အဓိက ဝါသနာပါခဲ့ပါတယျ။ တ ခွားကတော့ ခရီးထှကျပွီး ဆနျးသဈတဲ့ သဘာ ဝ ပတျဝနျးကငျြကို လိုကျပွီး လလေ့ာရတာ ဝါ သနာပါပါတယျ။
ကမ်ဘောဇတိုငျး။ ဂီတကို ဘယျအခြိနျက တညျးက စတငျဝငျရောကျ လုပျကိုငျခဲ့တာပါလဲ။ အခု လောလောလတျလတျမှာ ဂီတအပွငျ တ ခွား ဘာအလုပျတှေ လုပျပါသလဲ။
ခှနျငယျလငျး။ ၂ဝ၁၅ ခုနှဈလောကျမှာ စပွီး လုပျကိုငျဖွဈသှားတာပါ။ အခု လောလော လတျလတျတော့ အနုပညာ ဂီတလုပျငနျး တဈ ခုပဲ လုပျကိုငျဖွဈနပေါတယျ။
ကမ်ဘောဇတိုငျး။ အဈကို့ရဲ့ အခဈြရေး အခွေ အနကေိုကော သိလို့ရမလား။
ခှနျငယျလငျး။ အခဈြရေး အခွအေနကေ တော့ အခုလောလောဆယျ ကြှနျတေျာ့ကို ကြှနျ တျော အခဈြဆုံးပါပဲ။ ကြှနျတျော လကျခံတဲ့ ဘဝ အနအေထားတဈခုကို ရောကျလို့ ကြှနျတေျာ့ စိတျသဘောထားနဲ့ နားလညျ လကျခံပေးနိုငျ မယျ့ မိနျးကလေး ရှိလာခဲ့ရငျတော့ ကြှနျတေျာ့ ဘဝ လကျတှဲဖျောအဖွဈ စိတျတူကိုယျတူနဲ့ လြှောကျလှမျးသှားမှာပါ။
ကမ်ဘောဇတိုငျး။ Galaxy Star ပွိုငျပှဲအပွငျ တခွား ဘာပွိုငျပှဲတှေ ဝငျပွိုငျဖူးသေးလဲ။ ဆုတှကေော ရရှိခဲ့တာ ရှိပါ သလား။
ခှနျငယျလငျး။ Galaxy Star မပွိုငျခငျ Mingalar Mandalay Singing Contest သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲမှာ ဝငျပွိုငျခဲ့ ဖူးပါတယျ။ အဲဒီတုနျးက Winner ဆု ရရှိခဲ့ပါတယျ။
ကမ်ဘောဇတိုငျး။ အဲဒီလို ပွိုငျပှဲတှေ ဝငျပွိုငျတဲ့ အခြိနျမှာ ဘယျလို အခကျအခဲမြိုးတှေ ကွုံတှေ့ ခဲ့ရပါသလဲ။
ခှနျငယျလငျး။ တေးဆိုပွိုငျပှဲ ဝငျခြိနျမှာအ တှအေ့ကွုံကတော့ အမြားကွီး ရခဲ့ပါတယျ။ အဓိက အခကျအခဲကတော့ ကိုယျပိုငျအားနညျး ခကျြနဲ့ အဖွကေို ရှာဖှခှေငျ့ရတာရယျ၊ ဆနျး ကယျြလှတဲ့ အနုပညာဂီတအလုပျကို ပိုပွီးလုပျ ဖို့အတှကျ တဈစိုကျမတျမတျ ကိုယျ့ကိုယျကို တှနျးအားပေးဖွဈသှားတာက ကြှနျတေျာ့အတှကျ အဓိပ်ပါယျရှိတဲ့ အခကျအခဲလို့ပဲ ခံယူပါတယျ။
ကမ်ဘောဇတိုငျး။ တေးဆိုအပွငျ တေးရေးနဲ့ အတီးဘကျကိုရော လုပျဖွဈပါသလား။ အခုလို အနုပညာလမျးကွောငျးကို လြှောကျလှမျးတဲ့အ ခါမှာ ကူညီပံ့ပိုးတဲ့သူတှေ ရှိခဲ့ပါသလား။
ခှနျငယျလငျး။ တေးဆိုအပွငျ ကြှနျတျော သီခငျြးတှလေညျး ရေးပါတယျ။ အတီးပိုငျးလညျး လုပျဖွဈပါတယျ။ ဂီတအနုပညာ ညီအဈကိုတှေ နဲ့ အပွနျအလှနျ ဖေးမကူညီပံ့ပိုးရငျးနဲ့ပဲ စီးရီး တှေ လုပျဖွဈခဲ့ပါတယျ။
ကမ်ဘောဇတိုငျး။ သီခငျြးဆိုတဲ့အခါ ပအိုဝျးသီ ခငျြးရော ဗမာသီခငျြးရော ဆိုတာ တှရေ့တယျ။ ဘယျဘာသာကို ပိုပွီး အားသနျပါသလဲ။ ဘယျ လို ဂီတအမြိုးအစားကို ပိုအားသနျပွီးတော့ ဆို ဖွဈပါသလဲ။
ခှနျငယျလငျး။ ကြှနျတျောက ပအိုဝျးတိုငျး သား လူမြိုးဖွဈတဲ့တှကျ ပအိုဝျးသီခငျြးလညျး ဆိုပါတယျ။ အဆိုပိုငျးမှာ ဘယျဘာသာကို အား သနျတယျလို့တော့ မရှိပါဘူး။ မွနျမာနိုငျငံမှာ မှေးပွီး မွနျမာနိုငျငံသား တဈယောကျအဖွဈ ခံယူထားတဲ့အတှကျ မွနျမာသီခငျြးတှကေို အ မြားကွီး ပိုပွီးလုပျဖွဈသှားဖို့ မြားပါတယျ။ ဂီတ ကိုတော့ အမြိုးအစား အားလုံးကွိုကျတယျ လကျခံတယျ။ ဒါပမေဲ့ Rock ဂီတကိုပဲ ပိုရူးသှပျပွီး ပိုလဲဆိုဖွဈပါတယျ။
ကြှနျတျောက ပအိုဝျးတိုငျး သား လူမြိုးဖွဈတဲ့တှကျ ပအိုဝျးသီခငျြးလညျး ဆိုပါတယျ။ အဆိုပိုငျးမှာ ဘယျဘာသာကို အား သနျတယျလို့တော့ မရှိပါဘူး။ မွနျမာနိုငျငံမှာ မှေးပွီး မွနျမာနိုငျငံသား တဈယောကျအဖွဈ ခံယူထားတဲ့အတှကျ မွနျမာသီခငျြးတှကေို အ မြားကွီး ပိုပွီးလုပျဖွဈသှားဖို့ မြားပါတယျ။ ဂီတ ကိုတော့ အမြိုးအစား အားလုံးကွိုကျတယျ လကျခံတယျ။ ဒါပမေဲ့ Rock ဂီတကိုပဲ ပိုရူးသှပျပွီး ပိုလဲဆိုဖွဈပါတယျ။
ကမ်ဘောဇတိုငျး။ အခှတှေေ ထုတျတဲ့ခြိနျမှာ ဘယျလို အခကျအခဲမြိုး ရငျဆိုငျခဲ့ရလဲ။ မှတျမှတျ ရရ ဖွဈခဲ့ဖူးတာတှကေော ဘာတှဖွေဈမလဲ။
ခှနျငယျလငျး။ Album ခှထေုတျတဲ့ အခြိနျ အခကျခဲတှကေတော့ အမြားကွီးပါ။ အဓိကတော့ ငှကွေေးအခကျ ခဲပေါ့။ ပွီးတော့ ကိုယျ့စိတျကူးထားတဲ့အတိုငျး ဖနျတီးမယျ့ သီခငျြးကို အကောငျထညျဖျောနိုငျအောငျ Band တှနေဲ့ အခြိနျယူ တိုငျပငျရတာပါပဲ။ မှတျမှတျရရတော့ သီခငျြးကောငျးကောငျးလေးဖနျတီးပွီး နားဆငျခံစားနိုငျဖို့က အခြိနျအငျအား လူအငျအား ငှအေငျအား ပေါငျးစညျးမှု ပညာအငျအား အမြားကွီး လိုအပျတယျဆိုတာပါပဲ။
ကမ်ဘောဇတိုငျး။ အဈကိုဆိုတဲ့သီခငျြး ဒါမှမ ဟုတျ ရေးတဲ့သီခငျြးတှထေဲမှာ ဘယျသီခငျြးကို အကွိုကျဆုံးလဲ။ အဈကိုရေးတဲ့ သီခငျြးတှေ၊ ဆိုတဲ့သီခငျြးတှထေဲမှာ အခဈြသီခငျြးထကျဘဝ သီခငျြးတှဆေိုတာ ပိုတှရေ့တယျ။ ဘာကွောငျ့ ပါလဲ။
ခှနျငယျလငျး။ လူ့ဘဝကကွိုး Album မှာ ခှနျနမြေိုးရေးပွီး ကြှနျတျောဆိုထားတဲ့ ''မလှနျ ဆနျနိုငျဘူး'' တဈ ပုဒျရယျ၊ ခှနျဆကျနဲ့ ဒေးဗဈ ခှနျနောငျရေးတဲ့ ''ရှောငျပုနျးရကျသူ'' သီခငျြးတှကေို အကွိုကျဆုံးပါပဲ။လူ့ဘဝဒဿန သီခငျြးက ကြှနျတေျာ့အတှကျ ပိုအကွိုကျတှစေ့ပွေီး ပိုပွီးအဓိပ်ပါယျရှိလို့ပါ။ လူသားအားလုံးကို ခဈြတဲ့စိတျလညျး ပါတာပေါ့။ အဲဒါကွောငျ့လညျး ဘဝသီခငျြးတှကေို ပိုဆိုဖွဈသှားတာပါ။
ကမ်ဘောဇတိုငျး။ အဈကို့ အနနေဲ့ Album ဘယျနှခှေ ထှကျပွီးပွီလဲ။ ဘယျနရောတှကေို ဖွနျ့ဖွဈပါသလဲ။ နောကျထပျကော Album တှေ ထပျထုတျဖို့ ရှိပါသလား။ ရှဆေ့ကျဂီတနဲ့ ပတျသကျလို့ဘာတှေ ထပျပွီး လုပျဆောငျသှား ဖို့ ရှိပါသလဲ။
ခှနျငယျလငျး။ တဈကိုယျတျော ဗူဘကာ အခှကေတော့ တဈခှပေဲ ထှကျဖွဈပါသေးတယျ။ ကနျြတာ တဈပုဒျစ နှဈပုဒျ Groups အခှေ တှမှောတော့ ပါဝငျဖွဈပါတယျ။ ဖွနျ့ခြိတာက တော့တဈနိုငျငံလုံးပါပဲ။ ခှပေေါငျး ၃ဝဝဝ ထုတျ ဖွဈပါတယျ။ နောကျထပျ ထုတျဖို့ အမြားကွီး အစီစဉျရှိပါတယျ။ ရှဆေ့ကျ ဂီတကိုတော့ အ ကောငျးဆုံး လုပျဆောငျသှားမှာပါ။ အားနညျး နတေဲ့ ဂီတပညာတှကေို လလေ့ာဆညျးပူး ဖွညျ့ စှကျရငျး နားဆငျခံစားသူ ခဈြပရိသတျတှကေို လညျး ဆနျးသဈတဲ့ ဖနျတီးမှုတှနေဲ့ အကောငျး ဆုံး ကွိုးစားပွီး အမွဲနားဆငျနိုငျအောငျ လုပျ ဆောငျ သှားမှာပါ။
ကမ်ဘောဇတိုငျး။ လူ့ဘဝကကွိုးဆိုတဲ့ သီခငျြးကို ဘာကွောငျ့ Album Title ပေးဖွဈတယျ ဆိုတာကိုလညျး ပွောပွပေးပါဦး။
ခှနျငယျလငျး။ ဒီ Album ထဲမှာ ကြှနျတျော အားအရဆုံး သီခငျြးကတော့ လူ့ဘဝကကွိုးပါပဲ။ သီခငျြးအားလုံးကို ခွုံကွညျ့ပွီးတော့ လူ့ဘ ဝကကွိုး ဆိုပွီး ပေးဖွဈသှားတာပါ။
ကမ်ဘောဇတိုငျး။ ပအိုဝျးတိုငျးရငျးသား တဈ ယောကျအနနေဲ့ ခုလို တေးရေး/တေးဆို လုပျ တဲ့ခြိနျမှာ ဘယျလို အခကျအခဲမြိုး ရှိခဲ့ပါသလဲ။
ခှနျငယျလငျး။ ပအိုဝျးတိုငျးရငျးသား တဈ ယောကျအနနေဲ့ တေးရေး/တေးဆိုမှာ ထှထှေေ ထူးထူး အခကျခဲတော့ မရှိပါဘူး။ အဓိကတော့ သီခငျြးဆိုတဲ့အခြိနျ စကားလုံး မပီသတာလေး တှပေေါ့။ အဲဒါလေးကိုတော့ သတိထားပွီး ပွငျ ဆိုရပါတယျ။
ကမ်ဘောဇတိုငျး။ လကျရှိ ဆောငျရှကျနတေဲ့ အနုပညာ ဂီတအပျေါ ကိုယျ့ကိုယျကို အားရ ကနြေပျမှု ရှိပွီလား။ ကိုယျ့ကိုယျကို လိုအပျမှု ရှိနသေေးတယျလို့ ယူဆမိပါသလားဗြ။
ခှနျငယျလငျး။ လကျရှိ အနုပညာဂီတနဲ့ ပတျသကျလို့ လုပျဆောငျနတေဲ့ နရောမှာ ကိုယျ့ ကိုယျကို သိပျပွီး အားရကနြေပျမှု မရှိသေးပါ ဘူး။ ကိုယျဖနျတီးခငျြတာတှေ အမြားကွီး အ ကောငျအထညျ ဖျောရဦးမှာပါ။ လိုအပျခကျြတှေ ကတော့ ကိုယျထပျပွီး ဖနျတီးခငျြတဲ့ ဂီတတှမေ ထှကျလာနိုငျသေးခြိနျပါပဲ။
ကမ်ဘောဇတိုငျး။ ရှမျးပွညျနယျရဲ့ နိုငျငံရေး အခွအေနနေဲ့ ပတျသကျလို့ကော ဘယျလိုမြား မှတျခကျြပွု ပွောကွားလိုပါသလဲ။
ခှနျငယျလငျး။ နိုငျငံရေး အခွအေနနေဲ့ ပတျသကျလို့တော့ ကြှနျတျော သိပျမသိပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ ပွညျသူတှအေားလုံး အဆငျပွပွေနေဲ့ ငွိမျးငွိမျးခမျြးခမျြး နစေခေငျြပါတယျ။
တေးသံရှငျ ခှနျငယျလငျးသညျ လတျတလောတှငျ လူ့ဘဝကကွိုး အမညျရ တဈကိုယျတျော တေးအယျလျဘမျ တဈခပျြကို ထုတျဝထေားပွီး အခွားသော အုပျစုအယျလျဘမျမြားတှငျလညျး တေးသီးခငျြးမြား တဈပုဒျစ၊ နှဈပုဒျစ သီဆိုထားပွီးကာ တေးသီခငျြး မြားစှာကိုလညျး ထပျမံဖနျတီးရနျ ရှိနသေေးသညျဟု သိရပါသညျ။